Shiinaha Waxsoosaarka Wax-ku-oolka cayayaanka Piperonyl Butoxide PBO soo saarayaasha iyo alaableyda | Senton
Piperonyl Butoxide PBO oo wax ku oolka ah cayayaan dilista
Qaab No.: CAS Maya: 51-03-6
Xigasho: Hormoonka cayayaanka
Sumeysiga Sare iyo Sare: Sunta yar ee Reagents
Qaabka: Sunta cayayaanka
Saamaynta Sunta: Ficil Gaar ah
Baakadaha: 25kg / durbaan
Wax soo saarka: 300ton / bishii
Goobta Asalka: Lagu sameeyay Shiinaha
Kartida Bixinta: 300ton / bishii
Dekedda: Dekedda Shanghai
Waxyaabaha aan waxyeellada lahayn ee qoyska loo yaqaan 'piperonyl butoxide' (PBO) waa qayb dabiici ah oo loo isticmaalo qayb ahaan Sunta cayayaankaqaabab. Waa mid adag oo cad oo dhogor leh. Waa wax shaqeyn kara Synergist . Taasi waa, in kasta oo aysan lahayn wax cayayaan ah oo u gaar ah, waxay sare u qaadeysaa awoodda qaarsunta cayayaanka sida carbamates, pyrethrins, pyrethroids, iyo Rotenone. Waa nooc ka mid ah wax soosaarka qayb ka mid ah safrole.
Magaca Badeecada PBO
CAS Maya 51-03-6
Caanaha kiimikada C19H30O5
Miisaanka 338.438 g / mol
Cufnaanta 1,05 g / cm3
Bar kulaylka 180 ° C (356 ° F; 453 K) 1 mmHg
Bar dhibic 170 ° C (338 ° F; 443 K)
Xallinta: Ku milmi karin biyaha, laakiin ku milmi kara dareerayaal badan oo dabiici ah oo ay ku jiraan saliidda macdanta iyo dichlorodifluoro-methane.
Xasiloonida: Iftiinka iyo shucaaca 'ultraviolet ray' oo xasilloon, hydrolysis u adkaysta, aan wax duminayn.
Sunta: Jiirka afka daran ee LD50to ayaa ka badan 11500mg / kg Jiirka afka daran ee LD50to waa 1880mg / kg. Qiyaasta nuugista nabdoon ee muddada dheer ee ragga waa 42ppm.
Isticmaala:Piperonyl butoxide (PBO) waa mid ka mid ah iskudhafka ugu fiican ee kor u qaada waxtarka sunta cayayaanka. Kaliya maahan inay si cad u kordhin karto saameynta sunta cayayaanka in ka badan toban jeer, laakiin sidoo kale waxay sii dheereyn kartaa muddada waxtarka. PBO si ballaaran ayaa loogu adeegsadaa gudahabeeraha, caafimaadka qoyska iyo ilaalinta keydinta. Waa saamaynta kaliya ee la oggol yahaySunta cayayaanka loo isticmaalay nadaafadda cuntada (wax soo saarka cuntada) ee Hay'adda Qaramada Midoobay ee Nadaafadda.
Inta aan ku shaqeyneyno badeecadan, shirkadeena wali waxay ku shaqeyneysaa alaabooyin kale, sida Dhexdhexaadinta Kiimikada Caafimaadka, Xakamaynta Duulista, Caafimaadka Caafimaadka, Dinotefuran iyo wixii la mid ah.
Ma waxaad raadineysaa soo saare iyo soo-saare wax-soo-saare Butoxide ah oo aan Waxyeello lahayn? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhamaan PyrethroidIsku-duwaha sunta cayayaankawaa la damaanad qaaday tayada. Waxaan nahay Warshadda Shiinaha ee Asalka ah ee Shaqeeyaha Wadajirka ah ee Piperonly Butoxide. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Chlorempenthrin 95% TC Xakamaynta Cayayaanka Cayayaanka
Xakamaynta Cayayaanka Ka-hortagga Cayayaanka ee Transfluthrin
Gaar ahaan wax ku ool ka ah Acarids Amitraz
Ethofenprox cayayaanka Ethephon Agrochemical
Wax-ku-oolnimada Kaneecada gariiradda oo ka kooban ...
Pyrethroids cayayaanka Synergists Piperonyl Bu ...